Xaflad lagu daah-furay hirgalinta nidaam casriya oo lagu bixinayo lacagta mashruuca PSNP. - Cakaara News
Xaflad lagu daah-furay hirgalinta nidaam casriya oo lagu bixinayo lacagta mashruuca PSNP.
Jigjiga(Cakaaranews) Arbaco 8da February 2017. Xaflad lagu daah-furay hirgalinta nidaam casriya oo lagu bixintoona lacagaha uu gaadhsiiyo dadka danyarta ah ee ka faaiidaysta mashruuca PSNP ayaa ka dhacday huteelka city crown ee magaalada jigjiga.
Waxaana furitaankii xafladan ka soo qaybgalay masuuliyiin ka socday xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI, masuuliyiin ka socday xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah DDSI iyo masuuliyiin ka socday hay’adaha ay bah-wadaagta yihiin mashruuca PSNP.
Hadaba waxaana furitaankii xafladan daah-furka ah ka hadlay wasiir kuxigeenka xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI mudane Jamaal faarax warmooge oo ka warbixiyay isbadaladii iyo jaran jarooyinkii uu soo maray nidaamka mashruuca PSNP isaga oo sheegay in markii hore laga soo bilaabay in mashruucani gaadhsiiyo dadka dan yarta ah raashin iyada oo markii danbana loo badalay in deeqda mashruucan lagu siiyo dadka danyarta ah caash/ lacag cadaan ah si ay iyagu wax soo saarka ula soo baxaan . Wuxuuna wasiir ku xigeenku intaa ku daray ayaa in xafladan maanta la daah furayaana tahay sidii loo hirgalin lahaa nidaam casriya oo la adeegsanayo aaladaha casriga ah in bulshada lagu gaadhsiiyo deeqaha lacagta nidaamka hello cash ah iyada oo qofkasta moobilkiisa lacagta loogu shubidoono.